Aayadda Dahabka Dahabka ah, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
David Letterman, oo ah maamule bandhig madadaalo oo Mareykan ah, ayaa caan ku ah tobanka liiskiisa ugu sareeya waxaana badiyaa la i weydiiyaa tobanka filim ee aan ugu jeclahay, buugaagta, heesaha, suxuunta iyo gadhka. Waxaa suuragal ah inaad sidoo kale liisaska ugu jeceshahay. Sanadihii la soo dhaafay, qaar ka mid ah maqaaladeyda ayaa ku saleysan tobanka aayood ee aan ka helay Kitaabka Quduuska ah. Waa kuwan lix ka mid ah:
"Kii aan jeclayn Ilaah ma yaqaan, waayo, Ilaah waa jacayl." (1 Yooxanaa 4,8)
Masiixu xor buu noo xoreeyay! Markaa imminka way cadahay oo yaanan mar dambe harqoodkii addoonnimada lagugu xidhin. (Galatiya 5,1)
"Maxaa yeelay Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u badbaadiyey adduunkoo dhan." (Yooxanaa 3:17) "
Laakiinse Masiixu waa inoo muujiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo oo ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn. (Rooma 5,8)
Sidaas daraadeed hadda kuwa xukuntay Ciise Masiix xukun ma laha. (Rooma 8,1) "
Sababtoo ah jacaylka Masiixu wuu inagu boorinayaa, gaar ahaan maadaama aan ku qanacsanahay haddii "mid" uu u dhintay dhammaan, ka dibna iyagu “dhammaantood” way dhinteen. Oo sidaas daraaddeed isagu waa u dhintay wax walba, in kuwa halkaas degganu ay sii noolaadaan, laakiin kuwa ku dhintay oo loo sara kiciyo iyaga. (2 Korintos 5,14: 15)
Akhrinta aayadahan waxay i siineysaa xoog waxaana marwalba ugu yeeraa aayadeyda guntin ee dahabka ah. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, sidaan inbadan ka bartay iyo jacaylka cajiibka ah ee Eebbe, liiskani si joogto ah ayuu isu beddelay. Raadinta xigmaddan waxay la mid ahayd raadinta khasnadda dahabka - arrinkan cajiibka ah ee laga heli karo dabeecadda cabbirro badan iyo qaabab, min microscopic illaa weyn. Sida dahabku ugu muuqdo dhammaan muuqashadiisa lama filaan ah, jacaylka Ilaah aan la beddeli karin ee innagu soo haya ayaa uga muuqan kara qaabab lama filaan ah iyo meelo aan la filayn. Fiqiga fiqi TF Torrance wuxuu ku sifeynayaa jaceylka sidan soo socota:
“Ilaah aad buu kuu jecel yahay oo nafsaddiisa ayuu isu bixiyey Ciise Masiix, wiilkiisii ​​uu jeclaa. Wuxuu dadka oo dhan uumay inuu ahaado badbaadadaada Ilaah. Ciise Masiix wuxuu ku ogaaday jacaylkiisa xad dhaafka ah ee aad adigu u qabo dabeecadda aadanaha sida ugu dambeysa oo ah inuusan isaga beddeli karin isagoon diidin Beelnimada iyo Iskutallaabta isla markaana Isaga dafiray. Ciise Masiix wuxuu u dhintey khaasatan adiga sababtoo ah waxaad tahay dembiile oo aadan u qalmin isaga. Isagu mar hore ayuu adiga kuu gaarka kuu ah, iyada oo aan loo eegin haddii aad isaga rumeysaneyso iyo in kale. Isagu jacayl buu kugu xidhay si jacaylkiisu kuu sii daayo. Xitaa haddii aad diido isaga oo aad rabto inaad cadaabta gasho, jacaylkiisu kuma kaa tagaayo. Sidaa darteed: Toobad keena oo rumaysta inuu Ciise Masiix yahay Badbaadiyahaaga. (Dhex dhexaadinta Masiixa, p. 94)
Mahadcelinteenna jacaylka Eebbe wey kordhaysaa markaan akhrinayno Kitaabka Quduuska ah maxaa yeelay Ciise, jacaylka Ilaah, ayaa ah bartilmaameedkooda xiisaha. Taasi waa sababta ay iga xumaato markii sahankii ugu dambeeyay la muujiyey in Masiixiyiin badan ay waqti ku lumiyaan "Ereyga Ilaah". Waxyaabaha birta lihi, si kastaba ha ahaatee, waa in 87% kuwa la wareystay ee sahanka Bill Hybel ee ku saabsan koritaanka ruuxiga ah ay yiraahdeen "caawinta kaniisadda ee fahamka qoto dheer ee Kitaabka Quduuska ah" ayaa ahaa baahidooda ugu muhiimsan ee xagga ruuxiga ah. Waxa kale oo layaab leh in jawaab-bixiyeyaashu sheegeen in daciifnimadooda ugu weyn ee kaniisaddoodu ay ahayd ku-guul-darradoodii ahayd in ay Kitaabka u sharraxdo qaab la fahmi karo Waxaan ka heli doonnaa oo keliya buugga dahabka ee Kitaabka Quduuska ah haddii aan qodno iyada oo loo marayo barashada Kitaabka Quduuska ah ee soo noqnoqda oo fikirka leh. Waxaan dhawaan aqriyey buugga Micha (mid ka mid ah nebiyadii yaryar) markii aan akhriyey khasnaddan:
Aaway caynkee Ilaahay ah adiga oo denbi dhaafa oo iska cafiya kuwa dhaxalkiisa ka hadhay; Oo aan cadhadiisa weligiis sii haysan, Maxaa yeelay, isagu waa mid raxmad badan. (Miikaah 7,18)
Miikaah wuxuu run ka sheegay Ilaah markii Ishacyaah ku dhawaaqay wakhtigii masaafurinta. Waxay ahayd wakhti la soo sheegayo musiibada. Si kastaba ha noqotee, Miikaal wuxuu ahaa nin rajo leh maxaa yeelay wuxuu ogaa in Ilaah nimco yahay. Erayga Cibraaniga ee naxariis ayaa asalkiisu ka soo jeedaa luqadda loo adeegsado heshiisyada ka dhexeeya dadka.
Qandaraasyada noocan oo kale ah waxaa ka mid ah ballanqaadyo daacadnimo ku xiran oo isla mar ahaantaana lasii daayo. Taasi waa sida nimcada Ilaah loo fahmo. Miikaah wuxuu xusayaa in nimcadii Eebbe loogu yaboohay awowayaashii reer binu Israa'iil, xitaa haddii aysan u qalmin. Waa dhiirigelin iyo dhiirrigelin in la fahmo in naxariista Eebbe isku mid noo tahay. Erayga Cibraaniga ah ee loogu adeegsaday Miikaah waxaa loo tarjumi karaa sidii jacayl xor ah oo aamin ah ama jacayl aan qallafsanayn. Waxaan hubin karnaa in naxariista Eebbe weligiis naloo diidi doonin maxaa yeelay dabeecaddiisa ayaa ku jirta inuu aamin ahaado sida uu noo ballan qaaday. Jacaylka Ilaah waa mid adag oo weligiis wuu noo naxariisan doonaa. Sidaa darteed waxaan ugu yeeri karnaa: "Ilaahow ii naxariiso dembiilayaal!" (Luukos 18,13). Waa maxay buro ka mid ah aayadda dahabka.